GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Moore Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
“Anya Jehova dị n’ebe niile, na-elegide ndị ọjọọ na ndị ọma.”—ILU 15:3.
IHE NDỊ I KWESỊRỊ ICHETA
Gịnị mere Jehova ji eleru gị anya?
Olee otú Jehova nwere ike isi dọọ gị aka ná ntị, baara gị mba, ma ọ bụ duzie gị?
Gịnị mere Jehova ji ekwe ka ọnwụnwa bịara anyị mgbe ụfọdụ?
1, 2. Olee ihe dị iche n’onyokomita na otú Jehova si eleru anyị anya?
N’ỌTỤTỤ mba, a na-etinye onyokomita n’okporo ụzọ ka e jiri ya na-enyota ụgbọala ndị na-agbafe. Ihe mberede mee, a na-eji ya amata otú o si mee. E nwee ọkwọ ụgbọala kụturu mmadụ gbaa ọsọ, onyokomita ahụ na-enyota ya. Ọ na-enyere ndị uwe ojii aka ịmata ọkwọ ụgbọala ahụ ma nwụchie ya. Onyokomita e tinyechara aghara aghara na-eme ka ọ dị mfe ijide ndị mere ihe ọjọọ, taa ha ahụhụ.
2 Baịbụl kwuru na “anya Jehova dị n’ebe niile.” (Ilu 15:3) Ma, ọ̀ pụtara na ihe mere Jehova ji na-ele anyị bụ naanị ka ọ mara ma ànyị adaala iwu ya? Jehova ò chebiiri anyị ka ọ taa anyị ahụhụ ozugbo anyị mejọrọ ihe? Mba. (Jere. 16:17; Hib. 4:13) Ihe mere Jehova ji eleru anyị anya bụ na ọ hụrụ anyị n’anya, chọọkwa ka ihe gaara anyị nke ọma.—1 Pita 3:12.
3. Olee ụzọ ise Jehova si eleru anyị anya?
3 Olee otú anyị ga-esi ghọtakwuo na Chineke hụrụ anyị n’anya? Ka anyị tụlee ụzọ ise Jehova si eleru anyị anya. (1) Ọ na-adọ anyị aka ná ntị tupu anyị emee ihe ọjọọ. (2) Ọ na-abara anyị mba ma anyị mee ihe na-adịghị mma. (3) Ọ na-eji ihe Baịbụl kwuru eduzi anyị. (4) Ọ na-enyere anyị aka ma ọnwụnwa bịara anyị. (5) Ọ na-agọzi anyị ma anyị mee ihe dị mma.
JEHOVA NA-EBU ỤZỌ ADỌ ANYỊ AKA NÁ NTỊ
4. Gịnị mere Chineke ji dọọ Ken aka ná ntị tupu ya emehie?
4 Ka anyị buru ụzọ tụlee otú Jehova si adọ anyị aka ná ntị tupu anyị emee ihe ọjọọ. (1 Ihe 28:9) Dị ka ihe atụ, Ken were “iwe dị ọkụ” mgbe Jehova na-anabataghị onyinye ya. (Gụọ Jenesis 4:3-7.) Jehova gwara Ken ka ọ “gbanwee mewe ezi ihe.” Jehova gwara ya na ọ bụrụ na ọ gbanweghị, “mmehie makpu n’ọnụ ụzọ” na-achọ inweta ya. Chineke jụrụ ya, sị: “Ị̀ ga-emeri ya?” Jehova chọrọ ka Ken nabata ndụmọdụ o nyere ya ka e nwee ike ‘bulie ya elu.’ A sị na Ken gere Chineke ntị, ya na ya ga na-adị ná mma.
5. Olee ụzọ dị iche iche Jehova si adọ anyị aka ná ntị?
5 Anyịnwa kwanụ? Jehova na-enyocha obi anyị. Ọ maara ihe ndị anyị na-eche na ihe ndị na-agụ anyị. O nweghị ihe anyị ga-ezoliri ya. Ọ hụrụ anyị n’anya, chọọkwa ka anyị mee ihe dị mma. Ma, ọ naghị amanye anyị amanye ime ya. Ọ hụ ihe na-adịghị mma anyị chọrọ ime, ọ na-adọ anyị aka ná ntị. Olee otú o si eme ya? Ọ bụrụ na anyị ana-agụ Baịbụl kwa ụbọchị, anyị na-agụtakarị ebe ga-enyere anyị aka ka anyị ghara ime ihe na-adịghị mma anyị chọrọ ime. Akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl nwekwara ike ikwu gbasara nsogbu anyị na ya na-alụ ma gwa anyị otú anyị nwere ike isi merie ya. Anyị gaa ọmụmụ ihe, a na-enye anyị ndụmọdụ ga-abara anyị uru.
6, 7. (a) Olee ihe gosiri na Jehova hụrụ onye nke ọ bụla na-efe ya n’anya? (b) Olee ihe anyị ga-eme ka aka ná ntị Jehova na-adọ anyị baara anyị uru?
6 Ndụmọdụ niile dị na Baịbụl gosiri na Jehova hụrụ onye ọ bụla n’ime anyị n’anya. E dere Baịbụl ọtụtụ narị afọ gara aga. E dekwara akwụkwọ ndị anyị ji amụ Baịbụl maka ọtụtụ nde mmadụ. Ọ bụkwa mmadụ niile nọ n’ọgbakọ ka e bu n’obi na-enye ndụmọdụ ndị a na-enye n’ọmụmụ ihe. Ma, Jehova chọrọ ka gịnwa gee ntị n’Okwu ya ka i nwee ike ime ihe ziri ezi. Jehova si otú a na-egosi na ya hụrụ gị n’anya.
Ọ bụrụ na anyị ejiri Baịbụl zụọ akọnuche anyị, ọ ga-eme ka anyị gbaara nsogbu ọsọ (A ga-akọwa ya na paragraf nke 6 na nke 7)
7 Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka aka ná ntị Chineke na-adọ anyị baara anyị uru, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịghọta na ihe banyere anyị na-emetụ ya n’obi. Ihe ọzọ anyị ga-eme abụrụ ime ihe Baịbụl kwuru, gbasie mbọ ike kwụsị iche ihe na-adịghị Chineke mma. (Gụọ Aịzaya 55:6, 7.) Ọ bụrụ na anyị emee ihe Chineke gwara anyị, anyị agaghị eme ihe ga-agbawa anyị obi. Ọ́ bụrụkwanụ na anyị egeghị Chineke ntị? Olee otú Jehova ga-esi gosi na ya ka hụrụ anyị n’anya?
JEHOVA NA-ABARA ANYỊ MBA N’IHI NA Ọ HỤRỤ ANYỊ N’ANYA
8, 9. Ọ bụrụ na mmadụ ejiri Baịbụl nye anyị ndụmọdụ, olee otú o si gosi na Jehova hụrụ anyị n’anya? Nye ihe atụ.
8 Ọ bụrụ na Jehova abaara anyị mba, ọ pụtara na ọ hụrụ anyị n’anya. (Gụọ Ndị Hibru 12:5, 6.) Nke bụ́ eziokwu bụ na ọ naghị atọ anyị ụtọ ma a baara anyị mba ma ọ bụ dọọ anyị aka ná ntị. (Hib. 12:11) Ma, ọ bụrụ na mmadụ ejiri Baịbụl nye anyị ndụmọdụ, ọ dị ezigbo mkpa ka anyị ghọta ihe mere o ji nye anyị ya. Ọ bụghị ka ọ kpasuo anyị iwe, kama ọ bụ ka anyị ghara ime ihe ga-eme ka anyị na Jehova ghara ịdị ná mma. Onye ahụ wepụtara oge ya ma gbalịa iji Baịbụl gosi anyị otú anyị ga-esi mee ihe dị Jehova mma. Anyị kwesịrị iji ndụmọdụ ahụ kpọrọ ihe n’ihi na o si n’aka Jehova.
9 Dị ka ihe atụ, e nwere otu nwanna nwoke na-ele ndị gba ọtọ tupu ya abata n’ọgbakọ. Mgbe ọ batara n’ọgbakọ, ọ kwụsịrị ile ya. Ka oge na-aga, ọ zụrụ ekwentị, jiri ya na-aga n’Ịntanet ele ndị gba ọtọ. (Jems 1:14, 15) Ihe a gosiri na àgwà ọjọọ ahụ ka dị ya n’obi, na-ere ka icheku ọkụ. Otu ụbọchị, o nyere otu okenye ekwentị ya, ebe a na-egosi ndị gba ọtọ apụta na ya. Ihe a nwanna ahụ na-ele ga-eme ka ya na Jehova ghara ịdị ná mma. N’ihi ya, okenye ahụ nyere ya ndụmọdụ ozugbo, ya egee ntị ma kwụsị ile ndị gba ọtọ. Jehova na-ahụ mmehie anyị na-eme na nzuzo. O nwekwara ike ịbara anyị mba tupu ihe emebichaa. Obi dị anyị ụtọ na Jehova na-eleru anyị anya.
IME IHE BAỊBỤL KWURU NA-ABARA ANYỊ URU
10, 11. (a) Olee otú anyị ga-esi gosi na anyị ma Jehova? (b) Olee otú otu ezinụlọ si ghọta na ime ihe Jehova kwuru na-aba uru?
10 Otu ọbụ abụ gwara Jehova, sị: “Ị ga-eji ndụmọdụ gị na-edu m.” (Ọma 73:24) Mgbe ọ bụla anyị chọrọ onye ga-enye anyị ndụmọdụ, anyị kwesịrị ịga na Baịbụl mata ihe Jehova chọrọ ka anyị mee. Anyị ga-esi otú ahụ gosi na anyị ma Jehova. Ime ihe Baịbụl kwuru ga-eme ka anyị na Jehova dị ná mma. Mgbe ụfọdụ, ọ na-enyere anyị aka igbo mkpa anyị na ezinụlọ anyị.—Ilu 3:6.
11 Dị ka ihe atụ, na Filipinz, e nwere otu nwanna nwere ezinụlọ buru ibu. Ha niile bi n’ebe e nyere ha ka ha na-akọ ugbo. Ọ na-akwụkwa onye nwe ebe ahụ ụgwọ. Nwanna a na nwunye ya bụ ndị ọsụ ụzọ oge niile. Otu ụbọchị, onye nwe ebe ahụ ha bi nyere ha akwụkwọ ka ha kwapụ. Ihe a merenụ juru ha anya. Ha mechara chọpụta na e nwere onye boro ha ebubo na ha anaghị akwụwa aka ọtọ. Nwanna ahụ malitere iche ebe ọ ga-akpọ ezinụlọ ya gaa. Ma ọ tụkwasịrị Jehova obi. Ọ sịrị: “Jehova ga-eme ka anyị nweta ebe anyị ga-ebi. Ọ na-egboro anyị mkpa anyị mgbe niile n’agbanyeghị ihe merenụ.” Nwanna a na ndị ezinụlọ ya mere ihe Baịbụl kwuru. N’agbanyeghị na e boro ha ebubo ụgha, o nweghị onye ha kparịrị ma ọ bụ sesa okwu. Mgbe ụbọchị ole na ole gachara, onye nwe ebe ahụ ha bi gwara ha akwapụzila. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na obi dị ya ụtọ maka otú ha si kpaa àgwà mgbe e boro ha ebubo. O nyekwudịrị ha ala ebe ha ga na-arụ ọrụ ubi. (Gụọ 1 Pita 2:12.) N’eziokwu, anyị mee ihe Baịbụl kwuru, Jehova ga-enyere anyị aka imeri nsogbu anyị nwere.
JEHOVA BỤ ENYI NA-ENYERE ANYỊ AKA MA ỌNWỤNWA BỊARA ANYỊ
12, 13. Olee ihe ndị nwere ike ime ka ụfọdụ ndị chee na Chineke anaghị ahụ ahụhụ ha na-ata?
12 Ebe ọ bụ na anyị na-efe Jehova, ọtụtụ ọnwụnwa na-abịara anyị. Ụfọdụ n’ime ha nwere ike ịnọte aka. O nwere ike ịbụ ọrịa, mkpagbu, ma ọ bụ na ndị ezinụlọ anyị na-emegide anyị. Anyị na nwanna nwekwara ike nwee ezigbo nghọtahie n’ihi na otú o si eme ihe dị iche n’otú anyị si eme.
13 Dị ka ihe atụ, nwanna nwere ike ikwu ihe were gị ezigbo iwe. I nwere ike ikwu, sị: ‘Ụdị ihe a ekwesịghị ime ná nzukọ Jehova.’ Ka a na-eme ka a na-eme, e nyekwuo nwanna ahụ ihe ùgwù, ndị nọ n’ọgbakọ wekwaara ya ka ezigbo mmadụ. I nwere ike ịna-ajụ, sị: ‘Olee otú ụdị ihe a ga-esi eme? Jehova ọ̀ na-ahụkwa ihe a na-emenụ? Ọ̀ ga-agba nkịtị?’—Ọma 13:1, 2; Hab. 1:2, 3.
14. Gịnị nwere ike ime ka Jehova gba nkịtị ka ụmụnna anyị nye anyị ndụmọdụ nwere ike iwe anyị iwe?
14 O nwere ike ịbụ na Jehova nwere ezigbo ihe mere o ji gba nkịtị. Dị ka ihe atụ, mmadụ nwere ike inye anyị ndụmọdụ, anyị echee na o nweghị ihe anyị mere, ezigbo iwe ewee anyị. Ma, o nwere ike ịbụ na Chineke ewereghị ya otú ahụ. Ndụmọdụ ahụ e nyere anyị nwere ike ịbụ ihe e kwesịrị inye anyị, nke anyị kwesịkwara ichebara echiche. E nwere otu nwanna sobu n’Òtù Na-achị Isi. Aha ya bụ Karl Klein. N’akụkọ ndụ ya, o kwuru na e nwere mgbe Nwanna Rutherford nyere ya ndụmọdụ n’ezoghị ọnụ. N’oge ọzọ, Nwanna Rutherford hụrụ ya, jiri obi ụtọ kelee ya, ma o nyeghị ya ihu. Nwanna Rutherford chọpụtara na ndụmọdụ ahụ o nyere ya ka na-ewe ya iwe, ya agwa ya, sị: “Kpachara anya. Ekwensu na-achọ inweta gị.” Ihe a ọ gwara Nwanna Klein baara ya uru. Nwanna Klein mechara kwuo na ya mụtara na ụmụnna anyị kwesịrị inye anyị ndụmọdụ nakwa na ọ bụrụ na anyị akpọ ha asị maka ndụmọdụ ha nyere anyị, Ekwensu ga-enweta anyị. *
15. Olee ihe anyị kwesịrị icheta ma ọnwụnwa bịara anyị?
15 Ọ bụrụ na ọnwụnwa abịara anyị, anyị na-achọ ka o bie ngwa ngwa. Ma, anyị kwesịrị ịmụta inwe ndidi. Ka e were ya na ị gara ịkwọ ọka, ya abụrụ na ndị bịara ịkwọ ọka karịrị akarị. Ị makwanụghị oge ọ ga-eruru gị. Ọ bụrụ na i wee iwe buru ọka gị gaa ebe ọzọ, i nwere ike ịchọpụta na ndị bịara ịkwọ ọka n’ebe ahụ ka ndị nọ n’ebe mbụ ahụ ị gara. O nwere ike iwe ezigbo oge tupu a kwọọrọ gị nke gị. Ma, ọ bụrụ na i nwere ndidi nọrọ n’ebe mbụ ahụ ị gara, e nwere ike ịkwọrọ gị ya ngwa ngwa karịa ebe ọzọ ahụ i bu ya gaa. Otú ahụ ka ọ dị anyị. Ọ bụrụ na ọnwụnwa abịara anyị, anyị enwee ndidi ma mee ihe Baịbụl kwuru, Jehova ga-enyere anyị aka idi ya.
16. Gịnị mere Jehova nwere ike iji kwe ka ọnwụnwa bịara anyị?
16 Jehova nwere ike ikwe ka ọnwụnwa bịara anyị n’ihi na ọ chọrọ ka anyị si na ya mụta ihe. (Gụọ 1 Pita 5:6-10.) Ma, ọ bụghị Chineke na-eme ka ọnwụnwa bịara anyị. (Jems 1:13) Ọ bụ ‘Onye mmegide anyị, bụ́ Ekwensu,’ na-akpata ọtụtụ nsogbu anyị nwere. Ma, anyị kwesịrị ịghọta na Jehova na-ahụ ahụhụ niile anyị na-ata, ọ hụkwara anyị n’anya. Ọ gaghị ekwe ka nsogbu ndị anyị nwere dịruo mgbe ebighị ebi. Ha ga-adịru “nwa oge.” Ka obi sie gị ike na ihe banyere gị na-emetụ Jehova n’obi nakwa na ọ ga-enye gị ike ị ga-eji tachie obi ruo ọgwụgwụ.—2 Kọr. 4:7-9.
JEHOVA GA-AGỌZI GỊ
17. Gịnị mere Jehova ji enyocha obi mmadụ niile?
17 Jehova na-enyocha obi mmadụ niile ka ọ mara ndị hụrụ ya n’anya. Hanenaị onye amụma gwara Eze Esa, sị: “Anya Jehova na-ahụzu ụwa dum iji gosi ike ya maka ndị obi ha zuru ezu n’ebe ọ nọ.” (2 Ihe 16:9) Esa atụkwasịghị Chineke obi ya niile. Ma, Chineke ‘ga-egosi ike ya’ n’ebe ị nọ ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ziri ezi.
18. Gịnị mere obi kwesịrị iji sie anyị ike na Jehova ga-agọzi anyị ma anyị na-eme ezi ihe? (Lee ihe e sere ná mmalite isiokwu a.)
18 Chineke chọrọ ka anyị ‘chọọ ezi ihe,’ ‘hụ ezi ihe n’anya’ ma ‘mee ezi ihe.’ Ọ bụrụ na anyị emee otú ahụ, ọ ‘ga-emere anyị amara.’ (Emọs 5:14, 15; 1 Pita 3:11, 12) Jehova na-ahụ ndị ezi omume, ọ na-agọzikwa ha. (Ọma 34:15) Dị ka ihe atụ, e nwere ụmụ nwaanyị Hibru abụọ na-aghọ́ nwa. Aha ha bụ Shifra na Pua. Fero nyere ha iwu ka ha gbuo nwa nwoke ọ bụla nwaanyị Hibru mụrụ ozugbo a mụrụ ya. Ụmụ nwaanyị abụọ a mere ihe Chineke chọrọ, ọ bụghị ihe Fero kwuru. Ha ekweghị egbu ụmụ ndị Hibru. Jehova hụrụ ihe ọma Shifra na Pua mere ma mee ka ha nwee ụmụ nke ha. (Ọpụ. 1:15-17, 20, 21) Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ịdị anyị ka o nweghị onye na-ahụ ihe ọma anyị na-eme. Ma, Jehova na-ahụ ha niile. Ọ ga-agọzikwa anyị.—Mat. 6:4, 6; 1 Tim. 5:25; Hib. 6:10.
19. Olee otú otu nwanna nwaanyị si mata na Jehova na-ahụ ihe ọma ọ na-eme?
19 E nwere otu nwanna nwaanyị bi n’Ọstria. Ma, ọ bụ onye Họngeri. Ọ chọpụtara na Jehova na-ahụ mbọ ọ na-agba n’ikwusa ozi ọma. Ebe ọ ma asụ Họngerian, ọ natara nọmba ụlọ otu nwaanyị na-asụ Họngerian. Nwanna nwaanyị a gara na nke ya ozugbo. Ma, o nweghị onye ọ hụrụ. Ọ gagidere na nke ya ruo otu afọ na ọnwa isii. N’oge ndị ahụ, o doweere ya akwụkwọ anyị, akwụkwọ ozi, na nọmba ekwentị ya. Ọ gaa mgbe ụfọdụ, ọ na-adị ya ka mmadụ ọ̀ nọ n’ụlọ. Ma, o nweghị onye na-emepere ya ụzọ. Otu ụbọchị ọ gara, otu nwaanyị si n’ụlọ ahụ pụta. Nwaanyị ahụ mesaara ya ihu ma sị ya: “Batawa. M gụrụ ihe niile i wetaara m. M na-eche gị kemgbe.” A na-enye nwaanyị ahụ ọgwụ n’ihi ọrịa kansa ọ na-arịa. N’ihi ya, ọ chọghị ka ya na ndị mmadụ kparịtawa ụka. E bidoro ịmụrụ ya Baịbụl. Chineke si otú ahụ gọzie nwanna ahụ maka otú o si gbaa mbọ.
20. Olee otú obi dị gị na Jehova na-eleru gị anya?
20 Jehova na-ahụ ihe niile ị na-eme, ọ ga-akwụkwa gị ụgwọ ihe i mere. Ọ bụrụ na ị mata na Chineke na-ahụ gị, o kwesịghị ịdị gị ka è ji onyokomita na-enyo ihe ọ bụla ị na-eme. Kama, o kwesịrị ime ka ị ghọta na Chineke hụrụ gị n’anya nakwa na ihe banyere gị na-emetụ ya n’obi.
^ para. 14 Akụkọ ndụ Nwanna Klein gbara n’Ụlọ Nche April 15, 1985.